The diamond carat gaar ah Pink 15.38 iibiyaan $ 31.6 million
diamond pink, gaar Pink
pear pink diamond ugu weyn, malana adduunka ayaa cad qaabeeya abid bixiyo xaraashka ee Sotheby ee Geneva, Pink gaar ah, kaas oo loo iibiyey $ 31.6 million.
All dhagaxyo iyo dheeman midab leeyihiin in lagu arko isha oo qaawan in lagu qiyaaso in ay midab, sida aragti ugu horeysay muuqaal ah waa muhiim. Qaadashada description midabka shahaadada keliya oo keliya ku siinayaa qayb ka mid ah sheekada.
dheeman Pink koobi karaa noocyo kala duwan oo midabo, laga bilaabo purplish in orangey in guduudasho, iyo dheemman this ayaa casaan ah cajiib firfircoon in ay u muuqataa in uu soo bandhigo galyadeena yar oo cas, taas oo dhab ahaan u gaar ah. Si ka duwan dheeman kale midab halkaas oo cado ka waxaa keena yimaada ee la eb kale sida nitrogen ama boron, la dheeman casaan midabka dhacdaa sababtoo ah dhalanrog ama stress in qaab-dhismeedka baraf markii la sameeyay malaayiin sano ka hor.
The diamond carat gaar ah Pink 15.38 laga gooyay by Cora International, shirkad caalamka oo caan ku ah soo saara dheeman dhif ah ee tirada badan iyo midabkiinaba, malana cad. Hawsha goynta iyo qiraan this crystal xunxunna ay bilaabeen lahaa bilood badan oo go'aan ka sida loo gaaro midabka si ay kara ugu badnaan, oo kaliya, waxaa jira a jaraya aad u yar adduunka, kuwaas oo qaadan kara tartan this.
Waxaa jira element ah ee halista ku jarida diamond kasta, iyo jarida dhagax midab waa ka sii adag sida aad rabto in aad ka dhigi midabka sida xooggan oo sida ugu macquulsan by qaadan in radiate ka dhexe ee dhagaxa. Marka jarida dheeman cad, xeelad ka soo horjeeda ayaa loo baahan yahay si aad u eegto Biyuhu. Waa mid aad u adag tahay in la qiyaaso midabka danbeyn dheemman pink halka la gooyaa on wheel sida ay kululeeyo kartaa ilaa muddo gaaban samaynta iyaga u beddeli midabka, si magaabay wiil ma arki doono natiijada run ilaa diamond ah ayaa hoos u qaboojin.
The Institute Gemological of America fasalada ku dhowaad dhammaan of dheeman ugu muhiimsan ee dunida oo dhan of dheeman soo gudbiyey si shaybaarka sannad kasta wax ka badan boqolkiiba saddex waxaa loo kala saaraa dheeman midab. In ka yar boqolkiiba shan ka mid ah kuwa dheeman midab yihiin inta badan pink. dhagax waxaa sidoo kale lagu tilmaamay inay Nooca IIa a kaas oo ah nooca ugu kiimikaad saafi ah oo diamond ku salaysan maqnaanshaha nitrogen. Kaliya labo boqolkiiba dhammaan dheeman miino bandhigay this hufnaan gaar ah.
ka mulkiilaha cusub iibsato mid ka mid ah GEMS naadir dabiiciga ah ee reebo isagu ama iyadu ay awoodaan in ay magaca dhagaxii, oo kaliya in aad ku darto in ay la aqonsado noqon doonaa.
Blue Diamond iibiyaan $ 58 Million
Maqalka Maqalka Maqalka
Maqaarka indhaha ee maqaarka